Nidaamka Shaqo ee Socotada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirqaade: Ginna Lindberg/Sveriges Radio
Nidaamka Shaqo ee Socotada
La daabacay tisdag 23 augusti 2011 kl 13.42
Tiro gaarsiisan 10 oo keliya ayaa shaqaaloobay kana mid ah tiro 4 000 kor u dhaafaysa ee soo-galootiga laguna diiwaan geliyay qorshaha meeleeynta (etableringsplan) wixii ka dambeeyay bishii diseembar oo ay hayadda xafiiska shaqadu la wareegtay masuuliyadda nidaamka qorshe meeleeynta (etableringsplan).
Waxay middaasi ku cadaatay baaritaankii ugu horeeyay ee lagu sameeyo kadib daba-gal wixii ka dambeeyay bilowgii nidaamkaa. Illaa iyo hadda xafiiska shaqada ayaa ku qaabilay qorshe meeleenta dadyow tiradoodu gaarsiisan tahay 4 134. Gobollada Istockholm, Västra Götaland iyo Iskåne ayaa ugu badan gobollada qaabilay soo-galootiga cusub.
3 330 ayaa illaa iminka leh qorshe meeleeyn shakhsiyan ah. Halka nuxurka qorshe meeleeynta laga leeyahay ugu weyn yihiin firfircooni-gelin, qiimeeyn waayo-aragnimada iyo tacliinta, barashada afka iswiidhishka iyo ku jihaynta nolosha bulshada. 67% ee ka mid ah dadyoowga qoshahooda la dejiyay ayaa ku xiran shirkado madax bannaan ee loogu talo galay iney taakuleeyaan.